Jiolahy matin’ny fitsaram-bahoaka: notapahin’ny olona ny rantsan-tanany, voatonta vato ny lohany | NewsMada
Miverina mirongatra indray ny fitsaram-bahoaka, indrindra any Toamasina. Jiolahy iray voalaza fa mpanendaka no niharan’izany, ny alin’ny alakamisy teo. Notontan’ny olona vato ny lohany, avy eo, notapahina koa ny rantsan-tanany. Tsy tana ny ainy na nalefa teny amin’ny hopitaly aza.
Leo tsy fandriampahalemana ny mponina ao Toamasina. Tsy matoky fitsarana sy mpitandro filaminana intsony ny ankamaroan’ny olona. Vokany, miverina miseholany ny fitsaram-bahoaka. Ny alin’ny alakamisy 18 avrily tokony tamin’ny 9 ora alina, tovolahy iray sahabo ho 28 taona no saron’ny fokonolona tao Tanambao V, tsy lavitra ny hotel Marotia, nanendaka findaina olona sendra mandalo. Raikitra ny fanenjehan’ny olona azy ka tsy lasa lavitra, tratra ilay tovolahy.
Tsy nisy alaharo fa fitsaram-bahoaka avy hatrany ny nahazo azy. Vaky loha, notapahina rantsan-tanana havanana. Nisy olona tsara sitrapo niantso polisy. Tonga teny an-toerana ireto farany nandamina ny olona sy naka ilay mpanendaka. Nentina teny amin’ny Hopitaly manara-penitra izy io. Nomena fitsaboana sahaza azy ilay niharan’ny fitsaram-bahooaka. Tokony ho tamin’ny 12 ora alina, io alakamisy io, tsy tana intsony ny ainy.
Raha ny fanazavan’ny mponina eny amin’ny faritra Tanambao V, efa tsy vahiny amin’izy ireo ity tovolahy namoy ny ainy ity fa tena efa mpanendaka ikoizana. Mandeha ny fanadihadian’ny polisy.
Tsy voafehy ny fitsaram-bahoaka
Mbola sarotra ho an’ny fanjakana ny mamehy ny fitsaram-bahoaka. Hita fa mahazo vahana manerana ny Nosy izany, tao anatin’ny telo volana izay. Ny eto an-dRenivohitra ihany ny tsy ahitana izany hatramin’izao. Any amin’ny faritra, hatramin’ny mpitandro filaminana aza, iharan’ny fitsaram-bahoaka rehefa mihetsika ny olona. Taratry ny tsy fahatokisan’ny vahoaka ny mpitandro filaminana? Ny fitsarana? Fanentanana tahaka ny ahoana vao hilamina ny olona manoloana ny fitsaram-bahoaka tsy voafehy?